Translations < Burmese < Yoko < GlotPress Page5– Translate WordPress.com
Comments are closed.	 မှတ်ချက်ေပးြခင်းကို ပိတ်ထားသည်။	 Details
Newer Comments &rarr;	 မှတ်ချက် အသစ်များ &rarr;	 Details
မှတ်ချက် အသစ်များ &rarr;
&larr; Older Comments	 &larr; မှတ်ချက် အေဟာင်းများ	 Details
&larr; မှတ်ချက် အေဟာင်းများ
2014-06-02 05:20:26 GMT
Leaveacomment	 မှတ်ချက် ေပးထားခဲ့ပါ Details
This post is password protected. Enter the password to view any comments.	 ဒီစာမူကို စကားဝှက်ြဖင့် ပိတ်ထားသည်။ မှတ်ချက်များကို ြကည့်ရန် စကားဝှက်ြဖည့်သွင်းပါ။	 Details
ဒီစာမူကို စကားဝှက်ြဖင့် ပိတ်ထားသည်။ မှတ်ချက်များကို ြကည့်ရန် စကားဝှက်ြဖည့်သွင်းပါ။
Category Archives: %s	 ကဏ္ဍ မှတ်တမ်းများ : %s	 Details
ကဏ္ဍ မှတ်တမ်းများ : %s
Blog Archives	 ဘေလာ့ဂ် မှတ်တမ်းများ	 Details
Yearly Archives: <span>%s</span>	 နှစ်စဉ် မှတ်တမ်းများ : <span>%s</span>	 Details
နှစ်စဉ် မှတ်တမ်းများ : <span>%s</span>
2014-06-02 05:19:50 GMT
Monthly Archives: <span>%s</span>	 လစဉ် မှတ်တမ်းများ : <span>%s</span>	 Details
လစဉ် မှတ်တမ်းများ : <span>%s</span>
Daily Archives: <span>%s</span>	 ေန့စဉ် မှတ်တမ်များ : <span>%s</span>	 Details
ေန့စဉ် မှတ်တမ်များ : <span>%s</span>